Bayayenza into yabo abasakaza ibhola kuKhozi | Isolezwe
Bayayenza into yabo abasakaza ibhola kuKhozi
ezemisakazo / 16 January 2018, 10:36am / FANELESIBONGE BENGU
UJOE Hudla ongumethuli webhola emsakazweni uKhozi FM
ABALANDELI bebhola eNinigizimu Afrika bazokutshela ukuthi isiqala ukushuba imidlalo ye-Absa Premiership kwazise isisesigabeni sesibili nokungesokugcina.
Yilelo nalelo qembu lizimisele ngokufeza amaphupho alo njengelokudla isicoco, ukuqeda libalwa nayisishiyagalombili aphambili noma wukusuka emsileni uma kungukuthi libambe amabhuleki.
Njengoba kunguJanuwari nje nokuyisikhathi lapho amaqembu evunyelwe khona ukuhwebelana ngabadlali, amaqembu azama ukuqinisa izikwati zawo ukuze ayisonge kahle isizini.
Konke lokhu okwenza i-Absa Premiership ihehe kwenza abalandeli bangafuni ngisho nokuphuthwa wumdlalo owodwa.
Nami ngike ngazithola ngibuka iMamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates ngoMgqibelo emini. Ngithe ngisephakathi nomdlalo ngaphoqeleka ukuthi ngiwushiye ngoba bekukhona lapho obekumele ngiphuthume khona.
Ngenhlanhla ngithe ngivula Ukhozi FM ngezwa bewusakaza lo mdlalo ngangabe ngisaba nayo inkinga. Bekungekona okokuqala ngilalela ibhola emsakazweni kodwa kulokhu ngilalele ngokujula ngoba bese ngiwubonile umdlalo ukuthi umnandi kanjani.
Kube sengathi ngisawubuka kwithelevishini ngendlela uJoe Hudla noJoe Nxumalo abebesakaza ngayo umdlalo.
Mina ngiwumuntu othanda ukuthi uma ebuka ibhola bese elalela nabahlaziyi ukuthi bathini ukuze ngifunde kabanzi ngabadlali.
Yikho kanye lokho okwenziwa nguNxumalo kokuthi akuphe umlando omncane ngomdlali futhi akutshele ukuthi yini esizokwenzeka. Uma umqeqeshi ezokwenza ushintsho uyakutshela ukuthi mhlawumbe iyiphi indlela iqembu elisuke selizodlala ngayo.
Namancoko nje abo enza kube mnandi ukulalela uma besakaza umdlalo.
UHudla lapho-ke usuke engasagayelwe mphako ekutshela ukusuka nokuhlala ngokwenzekayo. Ngicabanga ukuthi uma usakaza ibhola izinto ezibalulekile okumele ulokhu uzazisa abalaleli yisikhathi umdlalo okuso, amagoli angenile ­­nokubatshela okwenzeka ngaleso sikhathi.
UHudla unekhono lokukubamba lapho usuthi khona uyashintsha avele amemeze bese eyazithulela. Lapho uvalo lukuthi heqe uma kudlala iqembu olilandelayo ngoba usuke usufuna ukuzwa ukuthi kwenzekeni, uthole ukuthi mhlawumbe umdlali ushaye eceleni kwepali.
Sengathi kodwa Ukhozi lungaqinisa uma sekuhlatshwe ikhefu ngokuthi kube khona abahlaziyi ngoba bavele badedele abalaleli ukuthi bashaye izingcingo baqagele ukuthi umdlalo uzophela kanjani. Lokho bangakwenza ngaphambi komdlalo.
Ngiyaxoxelwa ukuthi phambilini kwakukhona abantu abafana noKoos Radebe owayekuthatha ngamehlo engqondo uyibone into akhuluma ngayo ungabi naso nakancane isizungu sethelevishini, abantu ababefanna noDkt Ronny Masilela, Sjula Mnisi, Thetha Masombuka nabanye.
Ungangibhalela [email protected] noma kuTwitter @fanelebengu noma ku-Instagram @fanelebengu